UJULIE WALTERS UKHOKELA UTERRY PRATCHETT'S UMNTWANA OMANYUMNYEZI WEKHEPHU - IIMUVI
UJulie Walters ukhokela abadlali beKrisimesi oopopayi bakaTerry Pratchett's The Abominable Snow Baby
U-Julie Walters kaMamma Mia uza kunika ilizwi lakhe kwiChannel 4's adaptation ezayo kaTerry Pratchett's The Abominable Snow Baby, umsasazi ubhengeze.
Umdlali we-BAFTA kunye no-Emmy ophumeleleyo baya kudlala kwiKrisimesi ye-2021 ekhethekileyo njengoGogo ongoyikiyo, ngelixa uDownton Abbey 2 kaHugh Dancy evakalisa umzukulwana wakhe onenkalipho uAlbert noDavid Harewood waseHomeland.
Ngokusekelwe kwi-Pratchett's's late Ibali elifutshane elinelo gama , Umntwana olisikizi wekhephu ulandela isilwanyana esineemitha ezili-14 ubude, esifika kwidolophu encinci yaseNgilane kwaye siyanqandwa kwangoko ngabahlali bendawo.
Ngethamsanqa, uMakhulu ongenakuxolelwa kunye nomzukulwana wakhe uAlbert bagqiba kwelokuba bayihlangule i-Snow Baby kwaye bayihlambe ngothando, bencedisa idolophu ukuba yoyise ucalucalulo lwabo kule nkqubo.
Umntwana olisikizi wekhephu uza kudlala kwiChannel 4 kule Krismesi, abe ngowokugqibela kuthotho lomsasazi weefestile ezikhethekileyo ezifana neThe Snowman, iTiger Oze kwiTi kunye neQuentin Blake's Clown.
Ukufumana iindaba zamva nje kunye neengcebiso zeengcali malunga nokufumana ezona zinto zintle kulo nyaka, jonga ezethu NgoLwesihlanu oMnyama ngo-2021 kwaye NgoMvulo ngoMvulo 2021
Intloko yeDrama yeChannel 4, uCaroline Hollick, uthe kwingxelo: IChannel 4 yoopopayi boqobo beKrisimesi iye yaba yeyona nto iphambili kule minyaka kwaye kulo nyaka ayizukubakho.
Ndiyonwabile uJulie Walters, uHugh Dancy noDavid Harewood baya kuzisa ebomini le ntsomi imnandi, ihlekisayo kwaye ishukumisayo. Ndiyazi ukuba nguJulayi kuphela kodwa ngalo mgca wolinganiso omangalisayo andinakulinda… ngokuqinisekileyo izakuba yimbasa yeTerry yeKrisimesi.
U-Pratchett, osweleke ngo-Matshi 2015, waziwa kakhulu ngokubhala iinoveli ze-Discworld, kubandakanya i -Amazing Maurice kunye neeRodors zakhe ezifundisiweyo, ezitshintshelwa kwifilimu apho kudlala khona uDavid Tennant, uEmilia Clarke noHugh Laurie.
Umntwana olisikizi weSiqhwa oza kudlala kwiChannel 4 kule Krismesi. Ungathenga iTerry Pratchett's Umntwana Olusikizi Wekhephu isuka kwiAmazon . Ukuba ujonga into oza kuyibukela, jonga isikhokelo sethu seTV.
khulula ikhowudi ye-fortnite
Poldark isizini 4 episode 7
UHarry Potter ukhulula umhla wefilimu
Isitya sokuhlambela sangaphakathi
kutheni 666 embi
i-a word cast series 3
aude legastelois ukufa eparadesi